ပိုခကျြတီနို ဘယျသူတှကေို အဓိက ချေါယူခငျြသလဲ…. – Premier League Special
ကြောကျတူးသမားတှအေတှကျကတော့ ဒီကငျြးမရရငျ၊ ဟိုကငျြး ဟိုကငျြးမရရငျ ဒီကငျြးပါ။ နညျးပွတှအေတှကျကတော့ ဒီအသငျးမရရငျ ဟိုအသငျး၊ ဟိုအသငျးမရရငျ ဒီအသငျးပါ။ အခုတော့ အသငျးအတျောမြားမြားနဲ့ အသံထှကျခဲ့တဲ့ ပိုခကျြတီနိုတဈယောကျ အထိုငျကြ ဂဏနျးငွိမျသှားပါပွီ။
PSG အသငျးဟာ စပါး အသငျးနညျးပွဟောငျး ပိုခကျြတီနို ကို နညျးပွသဈအဖွဈ ခနျ့အပျလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။PSG အသငျးဟာ ပိုခကျြတီနို ကို (၂၀၂၂) ဇှနျလအထိ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တာဖွဈပွီး နောကျထပျတဈနှဈသကျတမျးတိုးခှငျ့ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
နညျးပွရာထူးရပွီဆိုတော့ ပိုခကျြတီနိုတဈယောကျ အသငျးသား အရှအေ့ပွောငျးချေါယူရောငျးခရြေးကိစ်စတှေ လုပျပါတော့မယျ။ အာဂငျြတီးနား လူမြိုး နညျးပွ ပိုခကျြတီနို ကသူ ချေါယူမယျ့ ကစားသမားတှကေို စာရငျး ပွုစုထားကွောငျး ကွားသိရပါတယျ။ ကစားသမားအတျောမြားမြားကို ပဈမှတျထားထားတာကွောငျ့ တခြို့ကစားသမားတှေ အကွောငျးကိုပဲဖျောပွပေးပါမယျ။
သတငျးတှေ အရ ပိုခကျြတီနိုဟာ စပါးအသငျးမှာ သူနဲ့အတူ လကျတှဲခဲ့ဖူးတဲ့ကစားသမားတှကေို အဓိက ချေါခငျြပါတယျ။ လိုရဈကနညျးပွမျောရငျဟိုရဲ့လကျအောကျမှာ ကစားနရေပမေယျ့ ဆရာဟောငျးဖွဈသူက PSG ကိုလာဖို့ ကမျးလှမျးလာရငျအသငျးပွောငျးဖှယျရှိနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အင်ျဂလနျ ကှငျးလယျကစားသမားအလီနဲ့ ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီတို့ကိုလညျး ထိပျတနျး ပဈမှတျတှေ အဖွဈ သတျမှတျထားကွောငျး သိရပါတယျ။
တဈခြိနျက စပါးအသငျးနဲ့ အင်ျဂလနျ အသငျးတို့ရဲ့ အဓိက ကှငျးလယျကစားသမား ဖွဈခဲ့ဖူးသူ အလီဟာ ပိုခကျြတီနိုရဲ့ နရောပေးမှုကွောငျ့ ထိပျတနျး ကစားသမား တဈဦး ဖွဈလာသူပါ။ လကျရှိ အခြိနျမှာတော့ စပါးအသငျးရဲ့ နညျးပွဖွဈသူ မျောရငျဟိုနဲ့ ဆကျဆံရေး အဆငျမပွေ ဖွဈနတောကွောငျ့ အသငျးကနေ ထှကျခှာခှငျ့ ရရှိထားသူဖွဈပါတယျ။
ပိုခကျြတီနိုရဲ့ နောကျထပျ ပဈမှတျတဈဦး ဖွဈတဲ့ မကျဆီကတော့ ယခုနှဈ ဘောလုံးရာသီ အကုနျမှာ ဘာစီလိုနာ အသငျးကနေ အလှတျ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထှကျခှာနိုငျမယျ့ ကစားသမား တဈဦးပါ။ ပိုခကျြတီနိုနဲ့ မကျဆီဟာ အာဂငျြတီးနား နိုငျငံသားတှေ ဖွဈနတောကွောငျ့ ပိုခကျြတီနိုဟာ မကျဆီကို ချေါယူနိုငျဖို့ ယုံကွညျမှု ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။ ချေါယူနိုငျဖို့အတှကျ နောကျထပျအားသာခကျြကတော့ တိုကျစဈမှူး နမောကွောငျ့ပါ။ နမောကသူ့အနနေဲ့ မကျဆီနဲ့အတူ နောကျတဈကွိမျတှဲကစားခငျြတယျလို့ ပွောဆိုထားလို့ ဖွဈပါတယျ။
PSG ရဲ့ နညျးပွသဈ ပိုခကျြတီနို အနနေဲ့ ဥရောပမှာ အသငျးသဈကို အောငျလံလှငျ့ထူနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးရမှာဖွဈသလို ပွညျတှငျးအောငျမွငျမှုတှကေိုလညျး ရယူသှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။အသငျးသဈမှာ နာမညျရဖို့၊ စပါးတုနျးကလို အထုတျမခံရဖို့ အတှကျ နမော၊ အမျဘာပတေို့လို ကမ်ဘာကြျောတှကေို ပိုခကျြတီနို တဈယောကျ ဘယျလိုကိုငျတှယျသှားမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
ပိုချက်တီနို ဘယ်သူတွေကို အဓိက ခေါ်ယူချင်သလဲ….
ကျောက်တူးသမားတွေအတွက်ကတော့ ဒီကျင်းမရရင်၊ ဟိုကျင်း ဟိုကျင်းမရရင် ဒီကျင်းပါ။ နည်းပြတွေအတွက်ကတော့ ဒီအသင်းမရရင် ဟိုအသင်း၊ ဟိုအသင်းမရရင် ဒီအသင်းပါ။ အခုတော့ အသင်းအတော်များများနဲ့ အသံထွက်ခဲ့တဲ့ ပိုချက်တီနိုတစ်ယောက် အထိုင်ကျ ဂဏန်းငြိမ်သွားပါပြီ။ PSG အသင်းဟာ စပါး အသင်းနည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနို ကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PSG အသင်းဟာ ပိုချက်တီနို ကို (၂၀၂၂) ဇွန်လအထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နည်းပြရာထူးရပြီဆိုတော့ ပိုချက်တီနိုတစ်ယောက် အသင်းသား အရွှေ့အပြောင်းခေါ်ယူရောင်းချရေးကိစ္စတွေ လုပ်ပါတော့မယ်။ အာဂျင်တီးနား လူမျိုး နည်းပြ ပိုချက်တီနို ကသူ ခေါ်ယူမယ့် ကစားသမားတွေကို စာရင်း ပြုစုထားကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ ကစားသမားအတော်များများကို ပစ်မှတ်ထားထားတာကြောင့် တချို့ကစားသမားတွေ အကြောင်းကိုပဲဖော်ပြပေးပါမယ်။ သတင်းတွေ အရ ပိုချက်တီနိုဟာ စပါးအသင်းမှာ သူနဲ့အတူ လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ကစားသမားတွေကို အဓိက ခေါ်ချင်ပါတယ်။ လိုရစ်ကနည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့လက်အောက်မှာ ကစားနေရပေမယ့် ဆရာဟောင်းဖြစ်သူက PSG ကိုလာဖို့ ကမ်းလှမ်းလာရင်အသင်းပြောင်းဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင် အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်ကစားသမားအလီနဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီတို့ကိုလည်း ထိပ်တန်း ပစ်မှတ်တွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
တစ်ချိန်က စပါးအသင်းနဲ့ အင်္ဂလန် အသင်းတို့ရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ အလီဟာ ပိုချက်တီနိုရဲ့ နေရာပေးမှုကြောင့် ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်လာသူပါ။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ စပါးအသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ မော်ရင်ဟိုနဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာကြောင့် အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့် ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ပိုချက်တီနိုရဲ့ နောက်ထပ် ပစ်မှတ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကတော့ ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ အကုန်မှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းကနေ အလွတ် ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာနိုင်မယ့် ကစားသမား တစ်ဦးပါ။ ပိုချက်တီနိုနဲ့ မက်ဆီဟာ အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ပိုချက်တီနိုဟာ မက်ဆီကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ယုံကြည်မှု ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။​​ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်အားသာချက်က​တော့ တိုက်စစ်မှူး နေမာ​ကြောင့်ပါ။ ​နေမာကသူ့အ​နေနဲ့ မက်ဆီနဲ့အတူ နောက်တစ်ကြိမ်တွဲကစားချင်တယ်လို့ ​ပြောဆိုထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
PSG ရဲ့ နည်းပြသစ် ပိုချက်တီနို အနေနဲ့ ဥရောပမှာ အသင်းသစ်ကို အောင်လံလွှင့်ထူနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်သလို ပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ရယူသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အသင်းသစ်မှာ နာမည်ရဖို့၊ စပါးတုန်းကလို အထုတ်မခံရဖို့ အတွက် နေမာ၊ အမ်ဘာပေတို့လို ကမ္ဘာကျော်တွေကို ပိုချက်တီနို တစ်​ယောက် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။